Wararkii ugu dambeeyay qaraxii maanta ruxay qeybo ka mid ah magaalada Muqdisho – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
Wararkii ugu dambeeyay qaraxii maanta ruxay qeybo ka mid ah magaalada Muqdisho
Waxaa faah faahin dheeraad ah laga helaayaa qarax sida la sheegay ahaa miino lagu rakibay gaari uu lahaa gudoomiyaha majmaca culimadda Soomaaliyeed Sheekh Yuusuf Cali Ceynte islamarkaana hore uga tirsanaa xildhibaanada baarlamaankii KMG ahaa, waxaana xilliga uu qaraxa dhacaayay uu Sheekh Yuusuf ku jiray Hoteel Wehliye ee magaalada Muqdisho.
Qaraxa kadib waxaa goobta soo gaaray ciidamo ka tirsan kuwa nabad-sugidda qaranka iyo kuwa booliska ee dowladda federaalka Soomaaliya, waxaana ay goobtaasi ka bilaabeen baaritaan xoogan.
Sidoo kale saraakiil ka tirsan ciidanka booliska Soomaaliya oo la hadlay warbaahinta Muqdisho ayaa sheegay in qaraxaasi lagu doonayay in lagu khaarajiyo Sheekh Yuusuf Cali Ceynte, balse uu ka bad-baaday.
Ilaa iyo haataan lama oga sababta rasmiga ee loo bar-tilmaameedsanayay Sheekh Yuusuf, waxaana warar madax banaan aa sheegaya in loo bar-tilmaameedsanayay maadaama uu yahay Aabaha dhalay C/raxmaan Ceynte oo ah wasiirka qorsheynta ee xukuumadda federaalka Soomaaliya.
Dhinaca kale, ma jirto wax qasaare uu geystay qaraxaasi, marka laga tago bur-bur soo gaaray muraayadda gaariga, iyo sidoo kale wiil dhalinyaro ah oo wadada dhinaceeda maraayay oo dhaawac soo gaaray.
Si kastaba ha ahaatee, ma jirto cid sheegatay mas’uuliyadda qaraxaasi, waxaana uu qaraxaan qeyb ka yahay qaraxyadda inta badan lagu bar-tilmaameedsado wariyaashaa, saraakiisha ciidan, ganacsato iyo dad kale ee ku nool magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya.